JTL धातु - चीन उच्च गुणवत्ता ४ '' 'एक ट्रे निर्माताहरु र आपूर्तिकर्ताहरु संग कालो सौंदर्य तालिका
1. 46 "उत्पादन कालो दुई nooses संग कालो मेज तालिका
Hith गुणस्तर को लागी टिकाऊ सामग्री: एक ट्रे संग ४ '' 'कालो ग्रूमिंग टेबल को सामग्री कण बोर्ड, पु छाला, एल्युमिनियम, र फलाम हो। टेबलटप कण बोर्ड बाट बनेको छ, गैर पर्ची पु छाला द्वारा कभर र एल्युमिनियम संग धार; टेबल खुट्टा स्टेनलेस स्टील हो। टिकाऊ र ठोस सामाग्री एक लामो समय सेवा जीवन आश्वासन लक्ष्य।
समायोज्य हात: यो ४ '"एक ट्रे संग कालो ग्रूमिंग टेबल ठोस फलाम बाट बनेको छ कि एक हात संग आउँछ। सुविधा को लागी, हात उचाई समायोज्य र पेंच knobs घुमाउने को माध्यम बाट अलग गर्न योग्य छ। अधिकतम उचाई 37.4 इन्च छ। तपाइँ स्वतन्त्र रूपमा हात उच्च र कम बिभिन्न पाल्तु जनावर शरीर आकार अनुसार समायोजित गर्न सक्नुहुन्छ।
अधिकतम लोड असर क्षमता: ४ '' 'एक ट्रे संग कालो ग्रूमिंग टेबल १२० किलो/२4४.l lb सम्म अधिकतम वजन क्षमता संग फलाम ट्यूब द्वारा समर्थित छ। सामान्य र सुरक्षित उपयोग को लागी, कृपया सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तालिका तपाइँको पालतू जनावर लाई अर्डर भन्दा पहिले लाई समात्न सक्छ।
Foldable टेबल खुट्टा: ४ 46 '' एक ट्रे संग कालो grooming तालिका foldable खुट्टा डिजाइन सुविधा। यो तालिका खुट्टा अन्तरिक्ष बचत को लागी केन्द्र मा फिर्ता तह गर्न अनुमति दिन्छ। यो प्रयोग गर्न सजिलो छ, ढुवानी र स्टोर।
2. 46 "कालो grooming टेबल दुई nooses संग उत्पाद विनिर्देशन
ITERM नं। HG-GT014
उत्पादन आकार 46 x 24 x 30 इन्च
MEAS ४ x x २ x x ५.३ इन्च
३. ४ का उत्पादन आवेदन "दुई nooses संग कालो सौंदर्य तालिका
४. ४ "कालो सौंदर्य तालिका दुई nooses संग उत्पादन योग्यता
JTL बिल्कुल तपाइँ तपाइँ के गर्न को लागी प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ 46 "कालो सज्जा टेबल दुई nooses र अन्य घरपालुवा जनावर आपूर्ति संग। हाम्रो टीम उच्च गुणस्तरीय तालिका र मूल्यवान ग्राहकहरु लाई अनन्य सेवाहरु प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छ। ग्राहक सन्तुष्टि हाम्रो सबैभन्दा ठूलो खोज हो। हामी पहिले र बिक्री सेवा पछि5× 24 घण्टा सेवा छ। हामीलाई छान्नुहोस्, तपाइँको सबैभन्दा भरपर्दो साथी !!
Q: दुई nooses संग 46 "कालो सौंदर्य तालिका को अधिकतम लोड के हो?
A: 46 "दुई nooses संग कालो grooming तालिका max.120kg/264.6lb लोड गर्न सक्नुहुन्छ।
हट ट्याग: 46 "एक ट्रे, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, उद्धरण, कारखाना, चीन मा बनेको, स्टक मा, थोक, गुणस्तर, चीन, नवीनतम बिक्री, छुट संग कालो ग्रूमिंग टेबल
४ '' 'कालो स्टेनलेस स्टील सौंदर्य तालिका
समायोज्य ऊँचाई 46 "कालो सौंदर्य तालिका
४ '' 'कालो हेवी ड्यूटी ग्रूमिंग टेबल